musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Taiwan Kupwanya Nhau » Taiwan Kuratidzira Kusvika kweSuppon Dutu Chanthu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • nhau • chengetedzo • Taiwan Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Nanfang'ao Harbor yakamanikidzwa nezvikepe - foto nemvumo yeCNA
Super Super Typhoon - Chanthu - iri kugadzira beeline kuTaiwan uye inotarisirwa kuita yakananga kuTaipei mangwana, Mugovera, Gunyana 11, 2021.
Iyo Super Typhoon parizvino ine yakasimba mhepo yakasimba ye180 mph ichiita chikamu che5 dutu.
Nzira yeChanthu iri kuinangisa yakananga kuTaiwan uye kuguta reTaipei.
Matutu echamupupuri akajairika munyika, zvinotarisirwa kuti dutu iri richaunza mhepo yakasimba uye nemvura, zvichikonzera mafashama akasimba pamwe nekukoromoka kwenyika.
Chanthu ane simba rakanyanyisa nemhepo yakakwenenzverwa yakasimba ye180 mph, ichiita chikamu chine njodzi 5 dutu. Meterologists vari kunyatso tarisa Super Dutu Chanthu kunyanya nekuti kwete chete iyo isina kurasikirwa nesimba mumazuva mashoma apfuura, iri kutowedzera.
Kufanotaura kunofungidzira kuti Chanthu achawira pasi muchikamu chechina dutu risati ramhara kumaodzanyemba kweTaiwan. Chikamu 4 dutu. Panguva iyo dutu parinopfuura padyo neguta reTaipei, rinotarisirwa kudzikisirwa kune chikamu chechipiri dutu.
Super Dutu Chanthu rinounza mhepo ine simba uye kunaya kwakanyanya kumatunhu ese, kubva pa5 kusvika 2. Madutu chikamu chetsika muTaiwan, zvisinei, Chanthu iri kutora nzira isina kujairika inoitora pamusoro penzvimbo iyi nemukana wekuwedzera mukana weakawanda. kukuvara. Mvura ine mvura zhinji ingangokonzera mafashama uye pamwe nekukoromoka kwenyika.
Mukati memazuva maviri chete, mhepo dzakatsiga dzakawedzera ne2 mph. Mamwe mashanu chete madutu akarekodhodza kukurumidza kwakadaro, achibva pakudzvinyirira kuenda muchikamu chechishanu dutu munguva pfupi, akadaro Sam Lillo, wezvemamiriro ekunze we National Oceanic uye Atmospheric Administration (NOAA).
Sekureva kweUS National Hurricane Center, kukurumidza kuwedzera kunotsanangurwa kuwedzera kwemhepo dzakanyanya dzakasimba neinenge mamaira makumi matatu nemashanu paawa mumaawa makumi maviri nemana. Mimwe miunganidzwa yakakosha yekukasira kukurumidza kwenzvimbo dzinopisa dzinosanganisira kupisa kwakanyanya pamusoro pegungwa, kuwanda kwemhepo yegungwa (chiyero chetembiricha yemvura pazasi pechiso), uye neshe yemhepo yakadzika yakatwasuka.
Mvura inodziya inoenda-pamwe-nemhepo inodziya inonaya, uye zvese zvinopa simba rakakosha uye hunyoro kune madutu. Vertical mhepo yekucheka ndiyo mutsauko mukumhanyisa uye kunongedzera kwenzvimbo yepasi-yepamusoro uye yepamusoro-chikamu mhepo. Shear yepamusoro inobvarura misoro kubva mukukudziridza madutu uye kuidzikamisa, nepo shear yakaderera ichibvumira dutu kuvaka.
ICentral Weather Bureau (CWB) inofungidzira kuti sezvo dutu richivhara muTaiwan, mhiri kwaro kuchatanga kukanganisa nyika neChishanu manheru, kuunza mvura kumabvazuva kweTaiwan. Mvura nemhepo zvichawedzera neMugovera, apo kunaya kwakanyanya kungaitika kumabvazuva kweTaiwan, Keelung City, uye Hengchun Peninsula. Iyo ChiTaiwanese vari kugadzirira nepese pavanogona napo, nemabhizimusi uye zvikoro zvakavharwa mukutarisira kuuya kwedutu.
Mayday, Mayday nemaseneta ese eUS uye Vamiriri ...